စက်တင်ဘာလ 7, 2015
အလေးချိန် ၅၀.၁၃ ကာရက်ရှိအလေးချိန်ရှိသော ၅၀.၁၃ ကာရက်ရှိကြီးမားသောလှပသောစိန်ပွင့်အကြီးများသည်ငွေနှင့်ရွှေဖြင့်တပ်ဆင်ထားပြီးကြီးမားသောတောက်ပသောစိန်ဟောင်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့်၊ ငွေနှင့်ရွှေဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်၊ ပိုကြီးသောရတနာ၏အဓိကကျသောနေရာ၊ စိန် ၆.၅၀ ကာရက်၊ ဖြုတ်တပ်နိုင်သည့်လက် ၀ တ်ရွက်၊ အရွယ်အစား ၄.၂ x ၃.၂ စင်တီမီတာ၏အရွယ်အစား၊ Mallet၊ Octagon Bath & 50.13၊ New Bond Street, London, London တို့ကအက္ခရာတင်ထားသည်။ “ Spinnel Ruby from မျှော်လင့်ချက်စုဆောင်းခြင်း” ။
ယခုနှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့်ရတနာအရောင်းရဆုံးဟုယုံကြည်ရသည့်အချိန်တွင်၊ Bonhams လန်ဒန်ကတင်ပြပါလိမ့်မယ် Spinel မျှော်လင့်ပါတယ်: အလွန်ကြီးစွာသောသက်သေပြ၏အံ့မခန်းရတနာနှင့်တစ် ဦး ရင်ခုန်စရာနှင့်ရုတ်ရုတ်သဲသဲဘဝနှင့်အတူ။ တစ်ချိန်ကကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကျောက်မျက်ရတနာစုဆောင်းမှုတစ်ခု၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည့်လန်ဒန်ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင် Henry Philip Hope သည် ၁၈၃၉ ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
ဒီစိတ်ကူးရတနာကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာ ၂၄ မှာ Bonhams London မှာလေလံတင်မှာဖြစ်ပါတယ် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၄၀,၀၀၀-၃၁၀,၀၀၀ ဖြစ်ပါသည်.
ဟင်နရီဖိလစ်ဟုပ် (၁၇၇၄-၁၈၃၉) ချမ်းသာကြွယ်ဝသောကုန်သည်များနှင့်ကုန်သည်ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များကျော်ကြားသောမင်းဆက်မှဖြစ်သည်။ အဆိုပါမျှော်လင့်ချက်လည်းထင်ရှားတဲ့စုဆောင်းနှင့်အနုပညာ၏နာယကခဲ့ကြသည်။ မိသားစုကုမ္ပဏီကသူတို့ကို ၀ င်ငွေအမြောက်အမြားပေးပြီးအလွန်များပြားလှသောတန်ဖိုးရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဓာတ်ပုံများ၊ ကြွေထည်များ၊ ရှေးဟောင်းပစ္စည်း၊ ပန်းပုများ၊ စာအုပ်များ၊ ၁၈၀၀ ပြည့်နှစ်တွင်လန်ဒန်သည်အရေးပါသောကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဗဟိုရုံသာမကဥရောပအနုပညာလောက၏အဓိကနေရာလည်းဖြစ်သည်။ ဇာတိရောပြည်ပမှချမ်းသာကြွယ်ဝသောအကျွမ်းတဝင်ရှိသူများသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အကောင်းဆုံးအရာဝတ္ထုများအတွက်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသည်။
အကြီးဆုံးသောမျှော်လင့်ခြင်းအစ်ကိုဖြစ်သူသောမတ်စ်သည်ကျော်ကြားသောပညာရှင်၊ စုဆောင်းသူ၊ စာရေးဆရာ၊ Neo-Classicism ကိုထောက်ခံအားပေးသူနှင့်ဉာဏ်အလင်းရရှိခဲ့သူဖြစ်သည်။ သူ့အတွက်အနုပညာသည်“ သူ၏တည်ရှိမှုနှင့်ဆိုင်သောအရာများ” ဖြစ်သည်။ သောမတ်စ်သည်သူ၏လန်ဒန်အိမ်၊ Duchess လမ်း၊ Mayfair နှင့်သူ၏တိုင်းပြည်အိမ်ကြီးဖြစ်သော Deepdene, Surrey တို့ကိုသူလူသိရှင်ကြားဘဏ္openedာတိုက်များနှင့်ပြည့်စေခဲ့သည်။ လှပသော Louisa Beresford (၁၈၅၁ တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်) နှင့်လက်ထပ်ပြီးနောက်၊ ဇနီးမောင်နှံသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ဖက်ရှင်ကျသည့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအပြင်အနုပညာနှင့်စာပေဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်များကိုကြီးမားသောအတိုင်းအတာဖြင့်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ သူတို့လင်မယားတွင်သား ၃ ယောက်ဖြစ်သောဟင်နရီသောမတ်စ် (၁၈၀၈-၁၈၆၂)၊ အက်ဒရီယန်ဂျွန် (၁၈၁၁-၁၈၆၃) နှင့်အလက်ဇန္ဒားဘီရက်စ်ဖော့ဒ် (၁၈၂၀-၁၈၈၇) တို့သည်သူတို့၏ဖခင်ရော၊
ဟင်နရီဖိလစ်သည်သူ၏အစ်ကိုသောမတ်စ်နှင့်သူ့မိသားစုနှင့်အလွန်ရင်းနှီးခဲ့သည်။ သူတို့နှစ် ဦး သည်အနုပညာလက်ရာများကိုမကြာခဏ ၀ ယ်ယူခြင်း၊ ဟင်နရီဖိလစ်သည်အဓိကအားဖြင့်ကျောက်မျက်များကိုစုဆောင်းရန်နှင့်သူ၏တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာများစုဆောင်းခြင်းအတွက်သူကိုအကောင်းဆုံးအမှတ်ရစေခဲ့သည်။ ဟင်နရီဖိလိပ္ပုသည်သူ၏ညီမဖြစ်သူ Louisa ကိုအလွန်လေးစားပြီးသူမ၏ခင်ပွန်းကဲ့သို့ရတနာများစွာကိုမြတ်နိုးသည်။ ထို့အပြင်သူမအနေဖြင့်သူမစုဆောင်းထားသောလူ့အဖွဲ့အစည်းဘောလုံးများတွင်အရေးကြီးဆုံးကျောက်မျက်အချို့ကိုဝတ်ဆင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
ဟင်နရီဖိလိပ္ပုသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောကျောက်မျက်ရတနာများနှင့်ရတနာများဖြစ်သည် သူ၏စုဆောင်းမှုကို ၁၈၀၀ ဝန်းကျင်မှသူသေဆုံးချိန်အထိဖွဲ့စည်းခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ရသည်။ Louisa Beresford-Hope သည်သူချစ်ခင်မြတ်နိုးရသူဖြစ်ခဲ့သောသူ၏ယောက္ခမဖြစ်သူကသူ၏စုဆောင်းမှုကသူ့ကိုအကြီးမြတ်ဆုံးပျော်ရွှင်မှုနှင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမည်သို့ဆန်းစစ်လေ့လာမည်ကိုပြန်ပြောပြခဲ့သည်။
၁၈၃၉၊ သြဂုတ်လတွင်၊ ထိုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတွင်သူမသေဆုံးမီ၊ ဟင်နရီဖိလိပ္ပုသည်အက်စ်ကတည်ထောင်သောပုလဲနှင့်အဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာများစုဆောင်းထားသည့်ပြတိုက်တစ်ခုကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ Hanover ဘုရင် Mr Bram Hertz အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့သောဂျာမန်ကျောက်မျက်ရတနာမှကျောက်မျက်ရတနာ ၇၀၀ ကျော်ကိုအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း၊ ဖော်ပြခြင်းနှင့်မျဉ်းကြောင်းဆွဲခြင်းဖြင့်သရုပ်ဖော်ခဲ့သည်။ Hertz ကစုဆောင်းမှုကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
“ ဒီကတ်တလောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အဖိုးတန်ကျောက်တွေစုဆောင်းခြင်းကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်လုပ်ခဲ့သူဟာအလုပ်ရှင်ကိုအလုပ်ခန့်ခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်အလွန်သန့်စင်သောအရသာ၏ရှားပါးသောပေါင်းစပ်မှု၊ သဘာဝလှပသောသဘာဝထုတ်လုပ်မှုများအတွက်အမြင့်ဆုံးနှင့်အတက်ကြွဆုံးချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်၎င်းတို့ကိုဝယ်ယူရန်အပေါများသည့်ရလဒ်များကြောင့်သာဖြစ်ပြီးအလွန်ရှားပါးပြီးထူးခြားသောအဖိုးတန်ကျောက်မျက်များကိုယူဆောင်လာခြင်းဖြစ်သည် အတူတူ; ထူးခြားဆန်းကြယ်သောထူးခြားသောနမူနာများမှပြိုင်ဘက်ကင်းသောအရောင်မျိုးစုံနှင့်သဘာဝတရား၏ထူးခြားသောစစ်ဆင်ရေးများအကြားတွင်ကျယ်ပြန့်သောသုတေသနနယ်ပယ်ကိုပေးအပ်သည့်စုဝေးမှုတစ်ခု၊ စာမေးပွဲတွင်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းပြီးများသောအားဖြင့်နားမလည်နိုင်သည့်မျိုးကွဲများ။ ”
ဟတ်ဇ်၏အကြံပြုချက်အရဟင်နရီဖိလိပ္ပု၏စုဆောင်းမှုကိုသိပ္ပံနည်းကျဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ တဆယ်ခြောက်ကတ္တီပါစီတန်းအံဆွဲ ကြောင်း glaze နှင့်ရေတွက်ခဲ့ကြသည်။ ကျောက်မျက်အားလုံးသည်အလွန်အရည်အသွေးကောင်းပြီးသမိုင်းဝင်အသင်းအဖွဲ့များလည်းရှိသည်။ အံသြဖွယ်အကောင်းဆုံးရတနာများ၊ပါဝင်သည်
မျှော်လင့်ချက်စိန်စုဆောင်းရရှိသည့်ဆုမှာ ၄၅.၅၂ ကာရက်ရှိနက်ရှိုင်းသောအပြာရောင်စိန်ကိုအိန္ဒိယရှိပြင်သစ်ကျောက်မျက်ကုန်သည် Jean-Baptiste Tavernier မှဝယ်ယူခဲ့ပြီး ၁၆၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်းတွင်ပြင်သစ်ဘုရင် Louis XIV သို့ရောင်းချခဲ့သည်။ မျှော်လင့်ချက်ရရှိသောအခါ၎င်းသည်တည်ရှိပြီးလူသိများသောစိန်ပြာလက်တစ်ဆုပ်စာမှတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ယနေ့တွင်၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျော်ကြားဆုံးစိန်တစ်လုံးဖြစ်ပြီး ၀ ါရှင်တန်ဒီစီရှိအမျိုးသားသဘာဝသမိုင်းပြတိုက်တွင်ပြသထားသည်။
အဆိုပါ ပုလဲမျှော်လင့်ပါတယ်အရှည် ၂ လက်မနှင့်အ ၀ န်းလေးလက်မခွဲ (ယခုသီးသန့်စုဆောင်းထားသောနေရာ) တွင်အကြီးဆုံးလူသိများသည့်ကြီးမားသော Baroque သဘာဝပုလဲဖြစ်သည်။
စိန်တွင်ထည့်ထားသော ၁၃၀ ကာရက်အလေးချိန်ရှိသော“ ပြိုင်ဘက်ကင်းသော” အပြာရောင်နီလာ
?? Tipu Sultan, Mysore ၏ကျား၏ဆင်စွယ်တန်ဆာဆင်ထားသော ၁၃၃ ကာရက်ရှိသောမြမြတစ်ခု
?? နပိုလီယံဘုရင် Joachim-Napoléon Murat နှင့်နပိုလီယံဘိုနာပါတ၏ယောက္ခမပိုင်ဆိုင်သောငါးမျှားသည့်ဓားရှည်
?? တစ်ချိန်ကအချင်းတစ်လက်မခွဲခွဲကျော်ရှိပြီးလူသိအများဆုံးကြောင်၏မျက်လုံး chrysoberyl သည်ယခင်ကကန်ဒီဘုရင် (သီရိလင်္ကာ) ၏သရဖူများဖြစ်သည်။
"Spinelle ကိုပေါင်းစပ်ထားသောအခြားပတ္တမြားများလည်းရှိသည်။ "
၁၆၅ ရာစု alchemist ရစ်ချတ်istဒင်၊ ၁၅၅၅ မှာ
အဆိုပါမူလဖြစ်ရပ်အတွက် The Hope Spinel ။
၁၇၈၃ ခုနှစ်မတိုင်မီအထိအနီရောင်နှင့်ပန်းရောင်လည်ဆွဲများကိုပတ္တမြားများအဖြစ်မှားယွင်းစွာပြုလုပ်ကြသည်၊ ပန်းရောင်ကျောက်မျက်ရတနာများကိုလှည့်ဖျားများဟုလူသိများပြီးနောက်မှပင်၎င်းတို့ကို“ balas” သို့မဟုတ်“ balais” ပတ္တမြားများအဖြစ်ရည်ညွှန်းနေဆဲဖြစ်သည်။ Balas ဟူသောဝေါဟာရသည်တာဂျစ်ကစ္စတန်နှင့်နယ်စပ်ရှိအာဖဂန်နစ္စတန်၏မြောက်ဘက်ပြည်နယ်ဖြစ်သော Badakhshan အတွက်ရှေးကျသောစကားလုံးမှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဤ Kuh-i-Lal ('အနီရောင်တောင်တန်း') သတ္တုတွင်းများသည်အေဒီ ၁ ရာစုမှကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးလည်ပတ်မှုအဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ Marco Polo (c ။ 1783 ?? - ၁၃၂၄) က“ ကောင်းမွန်သောအဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာများ” ကိုဘုရင်များအတွက်သာတူးဖော်ခဲ့သည်ကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးအခြားဘုရင်များကိုအခွန်အဖြစ်သို့မဟုတ်“ ဖော်ရွေလက်ဆောင်များ” အဖြစ်အခြားရှင်ဘုရင်များသို့ပေးပို့ခဲ့သည်။
မဂိုemကရာဇ်များနှင့်သူတို့၏ဘိုးဘေးများဖြစ်သည့်တီမီရီးဒီးယားတို့သည်သူတို့၏အလှအပနှင့်အကာအကွယ်ပေးသည့် Talismans များအတွက်ကြီးမားသော Kuh-i-Lal လှည့်ဖျားများကိုတန်ဖိုးထားသည်။
Kuh-i-Lal မှကြမ်းတမ်းသော spinel ဓာတ်ပုံ© Vincent Pardieu / fieldgemology.org
ကျောက်မျက်များကိုဖြတ်တောက်ခြင်းထက်ဆေးကြောခြင်းခံရပြီးမကြာခဏအုပ်စိုးရှင်များနှင့်monကရာဇ်မင်းတို့၏အမည်များကိုအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ The Carew Spinelလန်ဒန်ရှိ V&A ၏စုဆောင်းမှုတွင်ahကရာဇ် Jahangir၊ Shah Jahan နှင့် Aurangzeb တို့၏အမည်များဖြင့်ရေးထိုးထားသည်။
အဆိုပါ Carew Spinel, ဗစ်တိုးရီးယား & အဲလ်ဘတ်ပြတိုက်။ အဆိုပါ Rt အားဖြင့် bequeathed ။ ဟွန် ဂျူလီယာမာရိ, သမ္မတကတော် Carew ။
ပါရှန်း၊ ရုရှားနှင့်ဥရောပတော်ဝင်ဘဏ္asာတိုက်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်လာသည့်အံ့မခန်းဖွယ်မဂိုသရုပ်ဆောင်များပါဝင်သည် “ လူမည်းမင်း၏ပတ္တမြား”မင်းသား Black ကို ၁၃၆၇ ခုနှစ်တွင် Pedro the Cruel ကပေးခဲ့သည်။ သူသည် Agincourt တိုက်ပွဲတွင်သူ၏သံခမောက်၌ဝတ်ဆင်ခဲ့ပြီးယခုဗြိတိသျှပန်းပုလက်ရာများတွင် Imperial State Crown ၌တည်ရှိသည်။
၃၆၁ ကာရက် “ Timur Ruby”ဗြိတိသျှပန်းပုလက်ရာများတွင် Sultan Sahib Qiran နှင့် "Punjab Lion of the Ranjit Singh" တို့ကပိုင်ဆိုင်သည်။
ကက်သရင်းမဟာရဲ့ Imperial သရဖူ။
၁၉ ရာစုတွင်ဥရောပစံနမူနာများအရအရေးပါသောလှည့်ဖျားများကိုဖြတ်ပစ်ခဲ့သည်။ မျှော်လင့်ထားသည့် Spinel ၏ပွတ် o ဂံတြိဂံပုံသဏ္itsာန်သည်၎င်း၏ပန်းရောင်အရောင်နှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိုအကောင်းဆုံးအကျိုးရှိရန်အသုံးချသည်။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ SSEF ဓာတ်ခွဲခန်းသည်၎င်း၏အရွယ်အစား၊ အရောင်၊ သန့်ရှင်းမှုနှင့်ကောင်းမွန်စွာဖြတ်တောက်ခြင်းကြောင့်၎င်းကို“ ထူးခြား” အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ၁၉ ရာစုရတနာ၌တပ်ဆင်ထားသည့်အခြားကြီးမားသောလှည့်ဖျားမှုများကိုကြည့်ရှုနိုင်သည် ဘုရင်မ Therese ၏ "ပတ္တမြား" ရတနာ မြူးနစ်ဘဏ္asာရေး၌တည်၏။ ဒီကျောက်မျက်ရတနာများကို ၁၈၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် Elector Max III Joseph မှပတ္တမြားနှင့်လှည့်ဖျားများရောနှော။ အသုံးပြုခဲ့သည်။
ဘုရင်မ Therese ပတ္တမြား Tiara, c ။ 1830 - ပတ္တမြား, spinels, စိန်။
အဆိုပါ "Bagration" ရတနာယခု Westminster ၏ Duke စုဆောင်းမှုတွင်ရုရှားမင်းသမီးကက်သရင်း Bagration ပိုင်ဆိုင်သော ၁၉ ရာစုမှစိန်နှင့်လည်ဆွဲရတနာများဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Bagration Parure Tiara
သူ၏စုဆောင်းမှုတွင်မျှော်လင့်ချက် spinels ၁၆ ခုရှိခဲ့သည်အားလုံးဥရောပစတိုင်ဖြတ်။ နံပါတ် ၂-၁၆ ကိုသူ၏အစိုးရအဖွဲ့၏စတုတ္ထအံဆွဲတွင်ထားခဲ့သည်။ Hope Spinel နှင့်ဆင်တူသော်လည်းအရွယ်အစား ၃ ပေရှိသော်လည်းနံပါတ် ၃ နံပါတ် ၃ မှာ“ ruby ​​balais” ထက်“ ပတ္တမြား spinelle” ဟုဖော်ပြထားခြင်းကြောင့် Cartier မှ ၁၉၁၂ ခုနှစ်ခန့်တွင်ရောင်းချခဲ့သည်။ နံပါတ် ၁ သည်မျှော်လင့်ချက်လှည့်ဖျားနမူနာ ၁၆ ခုအနက်မှအကောင်းဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည်။ ၎င်းသည်ကက်ဘိနက် ၁၆ ခုမြောက်အံဆွဲ၌ထားရှိခဲ့ပြီးမျှော်လင့်ချက်၏အရေးကြီးဆုံးရတနာများဖြစ်သည်။ Hertz ကဒါကိုစာရင်းပြုစုခဲ့တယ်။
“ အလွန်ရှုပ်ထွေးလှသည့်ပတ္တမြားပုံသဏ္ofာန်နှင့်အလွန်သေးငယ်သောရနံ့အရောင်ရှိပြီးအလွန်ပျံ့နှံ့။ လှပသောဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်အားနည်းချက်၊ ချွတ်ယွင်းမှုများမရှိသောထူးကဲကောင်းမွန်သောပတ္တမြားလေးများဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ထူးခြားသောအရွယ်အစားနှင့်ကြီးမားသောပြီးပြည့်စုံမှုတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်း စား၍ ၎င်းကိုဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိဖြင့်ပြိုင်ဘက်ကင်းသောကျောက်မျက်ဟုခေါ်နိုင်သည်။ ဒါဟာ Medaillon en သတ်မှတ်ထားနှင့် brilliants နှင့်အတူကြွယ်ဝသော, ဒါဟာ 16 အံဆွဲထဲမှာထားရှိမည်။ "
အဆိုပါလှည့်ဖျားကိုအစေ့ ၁၉၉.၅ (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၅၀ ကာရက်) အလေးချိန်ရှိသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်တိကျသောခေတ်မီနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ချိန်။ အဆိုပါလှည့်ဖျား 50.133 ကာရက်အဖြစ်အတည်ပြုသည်။ မျှော်လင့်ချက်ကဒီ spinel ဆည်းပူးဖို့ဘယ်လိုရောက်လာတယ်ဆိုတာမသိဘူး။ သူ၏စုဆောင်းမှုအများစု၏သက်သေပြမှုသည်မရှင်းလင်းပေ။ ၎င်းသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောနှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။
ဆွေမျိုးများ၊ မိတ်ဆွေများ၊ အစေခံများ၊ အစေခံများ၊ ကျေးကျွန်များ၏ကျေးကျွန်များနှင့်ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်မိတ်ဆွေများကိုများစွာရက်ရောစွာအမွေအနှစ်များအပြီးတွင်သူ၏အလိုတော်အတိုင်းသူ၏ကြီးမားသောကံကြမ္မာကိုသူ့အားခွဲခြားရန်တောင်းဆိုခဲ့သည် သုံးယောက်, သူ့အစ်ကိုသောမတ်စ်၏သား။ သူ၏“ အလွန်ကောင်းသည့်နှလုံးသားနှင့်ချစ်ခင်မြတ်နိုးသောစိတ်ထား” ရှိ“ မိသားစု၏ကောင်းကင်တမန်” အဖြစ်သူ၏စာလုံးကိုကောင်းစွာခံထိုက်သည်။
သူသေဆုံးပြီးနောက်သူ၏တူများထံပေးပို့သောစာတွင်သူ၏ကျော်ကြားသောကျောက်မျက်ရတနာစုဆောင်းမှုအကြောင်းဖော်ပြထားခြင်းမရှိပေ။ ထိုဒေသတွင်ပေါင် ၈၀,၀၀၀ (ယနေ့ငွေဖြင့်ပေါင် ၈ သန်းနီးပါး) ရှိသည်။ ၎င်းအစားသေခြင်းတရားကိုမပေးနိုင်ရန်အတွက်သူသည်သူသေဆုံးသည်အထိအကျိုးခံစားခွင့်မှလျှို့ဝှက်ထားသောသီးခြားလုပ်ရပ်ဖြင့်၎င်းကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့သည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်ဟင်နရီဖိလစ်သည်မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းမှုကြောင့်သူ၏ကျောက်မျက်ရတနာများစုဆောင်းခြင်းနှင့်သူ၏အကြီးဆုံးတူတူဟင်နရီသောမတ်စ်ဟော့နှင့်သူ၏အငယ်ဆုံးတူတူအလက်ဇန္ဒားဘီရက်စ်ဖော့ဒ်တို့နှစ် ဦး စလုံးအားလျှို့ဝှက်လက်ဆောင်များပေးခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းဟင်နရီဖိလိပ္ပု၏တူများအကြားအလွန်အမင်းခါးသီးလှသည့်အများပြည်သူဆိုင်ရာတရား ၀ င်အငြင်းပွားမှုများဖြစ်လာခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအလက်ဇန်းဒါးသည်ကျောက်မျက်အများစုကိုအမွေဆက်ခံသင့်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သော်လည်းဟင်နရီသောမတ်စ်သည်စိန်အပါအ ၀ င်အဖိုးတန်ဆုံးရတနာရှစ်ခုကိုသိမ်းဆည်းရန်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ၁၈၄၉ တွင်သူသည်မိမိ၏မာန်မာနနှင့်ရွှင်လန်းမှုခံစားခဲ့ရပြီးအခြားအရာအားလုံးထက်မကနဂိုအတိုင်းရှိနေသောဟင်နရီဖိလစ်၏စုဆောင်းမှုကိုဖြန့်ကျက်လိုက်သည်။ လန်ဒန်ရတနာ Hunt နှင့် Roskell တို့သည်ကျောက်မျက်အချို့ကိုရယူနိုင်ခဲ့သည်။ ဗစ်တိုးရီးယားစုဆောင်းသူ Reverend Chauncey Hare Townshend (၁၈၆၈ တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်) သည်မျှော်လင့်ချက်ရတနာများကိုသူ၏စုဆောင်းမှုကိုလန်ဒန်တောင်ပိုင်း Kensington ပြတိုက် (ယခု V&A) တွင်ထားခဲ့သည်။ Alexander Beresford-Hope ၏အစုရှယ်ယာကို ၁၈၈၆ တွင် Christies မှရောင်းချခဲ့သည်။ Tiffany & Co တွင်အလုပ်လုပ်သောကျော်ကြားသော gemmologist ဂျော့။ အက်ဖ်။ ကွန်းသည်ရောင်းချမှုကို“ ဝမ်းနည်းဖွယ်ကွဲလွင့်ခြင်း” အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ပြီးသူ၏ထင်မြင်ချက်အရထိုကဲ့သို့စုဆောင်းခြင်းကို“ နဂိုအတိုင်းထိန်းသိမ်းထားသင့်သည်” ဟုဖော်ပြခဲ့သည် နိုင်ငံပိုင်အဖြစ်”; The Times of London သတင်းစာက“ ကုန်သည်များရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူများအကြားအလွန်အဖိုးတန်သောပြိုင်ဆိုင်မှုများ” ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
ဟင်နရီသောမတ်စ်မျှော်လင့်ခြင်းမှပိုင်ဆိုင်သည့်ကျောက်မျက်များသည် ၂၀ ရာစုတိုင်အောင်မိသားစုအတွင်းတွင်ရှိနေခဲ့သည်။ ၁၈၆၂ ခုနှစ်တွင်သူကွယ်လွန်ပြီးနောက်သူ၏မုဆိုးမအန်းအေဒဲလ်သည်ကျောက်မျက်ရှစ်နှင့်မျှော်လင့်ချက်ရတနာပစ္စည်းများအပါအဝင်သူ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုအမွေဆက်ခံခဲ့သည်။ သူတို့၏တစ်ခုတည်းသောကလေးသည် Henrietta ဆိုသောသမီးဖြစ်ပြီးလင်ကွန်း၏ Earl (နောက်ပိုင်းနယူးကာဆယ်လ် Duke) ၏ Henry Pelham-Clinton နှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည်။ ကျောက်မျက်များအထူးသဖြင့် Hope Diamond အပါအ ၀ င်မျှော်လင့်ချက်အမွေအနှစ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်သူသည်မြေးဖြစ်သူ Henry Francis Pelham-Clinton အားသူ၏တစ်သက်တာလုံးအတွက်မျှော်လင့်ထားသည့်အမည်သစ်နှင့်လက်နက်အထုပ်ကိုယူခဲ့သည်။
Francis Hope သည် ၁၈၈၇ တွင်inheritanceရာမအမွေကိုရရှိခဲ့သည်၊ မိမိအဘကဲ့သို့သူသည်မိမိနည်းလမ်းထက်ကျော်လွန်နထေိုငျကာကာလောင်းကစားသမားဖြစ်ခဲ့သည်။ ၁၈၉၆ တွင်သူသည်ဒေဝါလီခံရပြီးကြွေးမြီများကိုလျှော့ချရန်အနုပညာစုဆောင်းမှုများကိုရောင်းချရန်အတွက်အဖွား၏အမွေကိုချိုးဖောက်ရန်တရားရုံးများကိုအသနားခံခဲ့သည်။ ၁၈၉၈ တွင်သူသည်တန်ဖိုးရှိသောရုပ်ပုံများကိုရောင်းချခဲ့ပြီး ၁၉၀၁ ခုနှစ်တွင် Hope Diamond ကိုရောင်းခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်အမေရိကတိုက်သို့ရောက်ရှိလာသည်။ ၁၉၁၇ ခုနှစ်တွင်ကျန်ရှိသောဘဏ္treာများကိုရက်ပေါင်းများစွာအထိ“ The Hope Heirlooms” လေလံတင်ရောင်းချခြင်း၌ Christies ၌ပြန်လည်ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင်လက်ကောက်၏အဓိကကျသောအရာအဖြစ်တပ်ဆင်ထားသည့် Hope Spinel ကိုလန်ဒန်ကုန်သည် Drayson သို့ပေါင် ၁,၀၆၀ (ယနေ့ငွေဖြင့်ပေါင် ၈၀,၀၀၀) ဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည်။
ထို့နောက်လှည့်ဖျားသည်ဂျော့ခ်ျစတီဖင်၏ဒုတိယဇနီး၊ စတီဖင် (Baron Mount Stephen) (၁၈၂၉-၁၉၂၁)၊ ဂျိမ်းစ်တီယာနာ (ဂျင်) တီဖ်နဲလ် (၁၈၆၄-၁၉၃၃)၊ ဂျိမ်းစ်စတီဖင်၏ဒုတိယဇနီး၊ စကော့တလန်မျိုးရိုးမှ Lord Mount Stephen သည်ကနေဒါသန်းကြွယ်သူဌေးနှင့်ပရဟိတလုပ်ငန်းရှင်၊ မွန်ထရီရယ်ဘဏ်ဥက္က,္ဌ၊ ကနေဒါပစိဖိတ်မီးရထားလမ်းဥက္ကand္ဌနှင့်ဆောက်လုပ်သူနှင့်ဗြိတိသျှသက်တူရွယ်တူများဖြစ်လာသည့်ကနေဒါနိုင်ငံဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ၁၈၉၇ ခုနှစ်တွင်လက်ထပ်ခဲ့ပြီး Hertfordshire ရှိ Brockett Hall နှင့် London ရှိ Carlton Terrace တွင်ဗြိတိန်၌နေထိုင်ခဲ့သည်။ မိဖုရား Mary သည်မိဖုရား Mary ၏မိခင် Duchess of Teck ကိုစောင့်စားနေသည်။ တကယ်တော့သူမသည်တော်ဝင်မိသားစုများနှင့်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။ Brockett ခန်းမ၌မိဖုရား Mary နှင့် George V ကို Step ည့်ခံကျသော Stephens တောင်သည်ပုံမှန် regularly ည့်ခံခဲ့သည်။ Stephen Mount Stephen ကဘုရင်မ Mary အားအံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသောစိန်လည်ဆွဲအားပေးခဲ့သည်။ ၎င်းသည်မင်းသမီးမာဂရက်အားလက်ထပ်ခြင်းနေ့တွင်ဝတ်ဆင်ခဲ့သည်။
၁၉၃၃ ခုနှစ်မှာ Lady Mount Stephen ကွယ်လွန်သွားချိန်မှာလှည့်ဖျားဟာ Lord Stephen Stephen ရဲ့တူမ Elsie Reford (1933-1872) ဆီကိုရောက်သွားတယ်။ Elsie သည် Lord Mount Stephen ၏တူမနှင့် Montreal ချမ်းသာကြွယ်ဝသောစီးပွားရေးသမား Robert Meighen ၏သမီးဖြစ်ခြင်းသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်ထင်ရှားသည်။ သူမ၏အဝတ်အစားများကို Paris နှင့် New York တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသူမနှင့်သူမခင်ပွန်းရောဘတ် Reford တို့သည်အနုပညာနှင့်ရတနာများကိုစိတ်ထက်သန်စွာစုဆောင်းသူများဖြစ်ပြီးကနေဒါတွင်အကြီးဆုံးအနုပညာစုဆောင်းမှုတစ်ခုတွင်စုဆောင်းခဲ့သည်။ Elsie ၏ချွေးမဖြစ်သော Evelyn Reford (၁၈၉၉-၁၉၉၄) ကို (၁၉၂၀) ပြည့်နှစ်လန်ဒန်တရားရုံးတွင်တင်ဆက်သောအခါသူသည် Hope Spinel ကိုဆွဲကြိုးအဖြစ်ဝတ်ဆင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်လှည့်ဖျားအား Elsie ၏မြေးဖြစ်သူနှင့် Lady Mount Stephen Stephen ၏ဘုရားသမီးကအမွေဆက်ခံခဲ့သည်။ လက်ရှိပိုင်ရှင်သည် Reford မိသားစုမှဆင်းသက်လာသူဖြစ်ပြီး Spinel ကိုအန်တီဂျန်ပိုင် Hope Spinel ဟုအမြဲတမ်းလူသိများသည်။
ယနေ့ spinel သည်“ en medaillon” ကိုစိန်များဖြင့်တပ်ဆင်ထားဆဲဖြစ်ပြီးဘရိုရှာအဖြစ်တပ်ဆင်ထားသည်။
ပို့သည် ဂလော်ဒီယာ Carletti, အချိန်မှတဆင့်ရတနာ။ Bonham's ၏ပစ္စည်းအားလုံး
Tags:လလေံပှဲ • Bonhams • ဟင်နရီ • နေပြည်တော် • ဒဏ္.ာရီ • ဆောက်ပုတ် • သက်သေပြ • ဒီသီချင်းလေး • TheHopeSpinel
မှတ်ချက်0ခုသမိုင်းအတွက်ရတနာ: အဆိုပါမျှော်လင့်ချက် spinel"